Ku Samee Bacriminta Guryaha Guriga
Sidee loo Qariyaa Qashinka? Bacriminta qashinka dabiicigu waa lama huraan waana lama huraan markay qoysasku samaystaan ​​bacrimin gurigaaga ah. Qashinka lagu daadiyo ayaa sidoo kale ah hab wax ku ool ah oo dhaqaale lagu maareeyo qashinka xoolaha. Waxaa jira 2 nooc oo habab bacrin ah oo laga heli karo bacriminta dabiiciga ah ee guryaha lagu sameeyo pr ...
Bilow mashruucaaga soosaarka bacriminta dabiiciga ah
TAARIIKHDA Maalmahan, bilaabida khad soosaarka bacriminta dabiiciga ah iyadoo la raacayo hagida qorshaha ganacsiga saxda ah wuxuu hagaajin karaa bixinta bacriminta aan waxyeellada u lahayn beeraleyda, waxaana la ogaadey in faa'iidooyinka isticmaalka bacriminta dabiiciga ay aad uga badan tahay kharashka dejinta dhirta bacriminta dabiiciga ah, maahan ...
Digada idaha ah ee Teknolojiyada Sameynta Bacriminta Dabiiciga ah
Waxa jira beero badan oo ido ah oo ku kala yaal Australia, New Zealand, America, England, France, Canada iyo dalal kale oo badan. Dabcan, waxay soo saartaa tiro badan oo ah idaha adhiga. Iyagu waa agab ceyriin oo wanaagsan oo loogu talagalay wax soo saarka bacriminta dabiiciga ah. Sababta Tayada digada adhigu waa tan ugu horeysa ee dhaqashada xoolaha. ...
Ugu horreyntii, digada digaagga ee cayriin uma dhiganta bacriminta dabiiciga ah. Bacriminta dabiiciga ah waxaa loola jeedaa cawska, keegga, digada xoolaha, haraaga likaha iyo alaabada kale ee ceyriinka ah iyadoo loo marayo kala daadsanaanta, halsano iyo warshad sameynta ayaa laga dhigay bacrimin. Digada xoolaha waa mid ka mid ah cowska ceyriinka ah ...
Rakibaadda iyo dayactirka Silsiladda Cunnada ee Compost Turner
Silsiladda saxanka silsiladda silsiladda silsiladdu waxay xawaareysaa geeddi-socodka burburka qashinka dabiiciga ah Way fududahay in la shaqeeyo oo leh waxtar badan, sidaa darteed qalabkan isku-dhafka ah ayaa si ballaaran loogu isticmaalaa kaliya ma aha warshad soosaarida bacriminta dabiiciga ah, laakiin sidoo kale nafaqeynta beeraha. Kormeer intaadan tijaabin tijaabada ◇ ...
SIDEE AYAAD KU DOORAN KARTAA XULASHADA DHAQAALAHA FARSAMADA
Sahaminta alaabada ceeriin ee bacriminta dabiiciga ah Sababtoo ah qaddar aad u badan oo bacriminta kiimikada ah oo lagu dabaqo muddo dheer, maadada dabiiciga ah ee ku jirta ciidda ayaa yaraynaysa iyada oo aan laga takhalusi karin bacriminta dabiiciga ah. Hadafka ugu weyn ee warshad bacriminta dabiiciga ah waa soo saarista bacriminta dabiiciga ah ...
Sida loo xakameeyo tayada compost
Xakamaynta xaaladda wax soo saarka bacriminta dabiiciga ah, ficil ahaan, waa isdhexgalka astaamaha jireed iyo nafleyda ee geeddi-socodka qashin-qubka. Dhinac marka laga eego, xaaladda xakamaynta ayaa ah is dhexgal iyo isuduwid. Dhinaca kale, dabaylo kala duwan ayaa la isku qasan yahay, sababtoo ah quusitaanka ...
Sidee loo doortaa mashiinka leexinta compost?
Inta lagu guda jiro howsha soo saarista bacriminta dabiiciga ah ee ganacsiga, waxaa jira qalab muhiim ah oo door muhiim ah ka ciyaara qashinka haraaga ah ee mashiinka halsano-mashiinka isu roga compost, waxaan soo bandhigi doonnaa waxoogaa aqoon aasaasi ah oo ku saabsan leexinta compost, oo ay ku jiraan shaqooyinkiisa, noocyadiisa iyo sida loo doorto a. ..
Qashinka Biogas ee Xalka Soosaarka Bacriminta
In kasta oo digaagga digaagga ay ku sii kordhayeen caan ka ahaanshaha Afrika sannadihii la soo dhaafay, haddana waxay asal ahaan ahayd hawl yar. Si kastaba ha noqotee, dhowrkii sano ee la soo dhaafay, waxay noqotay hawl culus, iyadoo dhalinyaro badan oo ganacsato ah ay bartilmaameedsadeen faa'iidooyinka soo jiidashada leh ee la soo bandhigay. Dadka digaagga ee ove ...
SIDEE looga soo saaraa bacriminta dabiiciga ah qashinka cuntada?
Qashinka cuntada ayaa sii kordhayay maaddaama tirada dadka adduunku ay korortay magaalooyinkuna aad u weynaadeen. Malaayiin tan oo cunto ah ayaa sanad walba lagu tuuraa qashinka adduunka. Ku dhowaad 30% midhaha adduunka, khudradda, badarka, hilibka iyo cuntooyinka baakadeysan ayaa la tuuraa sanad walba ....
U isticmaal qashinka xoolaha si aad u soo saarto bacriminta dabiiciga ah
Daaweynta macquulka ah iyo u isticmaalka wax ku oolka ah ee digada xoolaha waxay u keeni kartaa dakhli badan beeralayda inteeda badan, laakiin sidoo kale waxay wanaajineysaa casriyeynta warshadooda. Bacriminta organic noolaha waa nooc ka mid ah bacriminta la hawlaha bacriminta microbial iyo organic f ...
Filter Press Mud iyo Molases Nidaamka Samaynta Bacriminta
Sucrose waxay leedahay 65-70% waxsoosaarka sonkorta adduunka. Nidaamka wax soo saarku wuxuu u baahan yahay uumis badan iyo koronto, waxayna soo saartaa haraadyo badan heerar kala duwan oo wax soo saar isku mar ah. Xaaladda Soo-saarka Sucrose ee Adduunka Waxaa jira in ka badan boqol waddan ...